Chondrichthyes: toetra, karazana ary famokarana | Green Renewable
ny Chondrichthyes (Chondrichthyans), antsoina koa hoe trondro cartilaginous, dia vondron'ireo biby misy taolan-tehezana efa tranainy. Na dia tsy dia maro loatra na isan-karazany toy ny trondro taolana aza izy ireo, ny fahaizany mampifanaraka amin'ny endriny, ny hozatra milomano, ny taova fandrenesana, ary ny fahazarana sy ny valanorano mahery vaika dia manondro fa nomena toerana ara-tontolo iainana mafy orina izy ireo eo amin'ny tontolo misy azy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Chondrichthyes, ny toetrany ary ny biolojia.
1 Ny toetra fototry ny Chondrichthyes
2 Lomano ny Chondrichthyes
Ny toetra fototry ny Chondrichthyes
Misy karazany roa ny trondro cartilaginous. Manaraka izany dia holazainay ny tena mampiavaka azy:
Anisan'ireo biby ireo ny antsantsa sy ny taratra. Ny sasany amin'izy ireo dia mpihinan-kanina, izy ireo no mahita ny rembiny amin'ny alalan'ny taova olfactory noho ny tsy fahampian'ny fahitana. Amin'izao fotoana izao dia misy karazana antsantsa maherin'ny 400 amin'ny baiko 8 ary karazana taratra 500 eo ho eo amin'ny baiko 4. Raha ny antsantsa, ny ankamaroany dia manana ireto toetra manaraka ireto:
tena: Vatana miendrika spindle misy tarehy maranitra ary kibo eo anoloana. Ny rambon'ny vatana dia misy rambony mihidy tsy ara-dalàna, izany hoe misy endrika roa samy hafa sy firafitry ny ravina, ny iray misy ny faran'ny hazondamosina, ary ny eo anoloana dia misy vombony roa, vombony roa. , ary dorsal roa. vombony hafahafa. Ao amin'ny lahy, ny vombony valala dia novaina taloha ho taova ara-nofo ho an'ny fanambadiana ary antsoina hoe glycoptera, pteropods, na genus.
Fahitana, hoditra ary taova mpandray: raha mifandray amin'ny vava izy ireo dia manana orona mitovy, ventral ary aloha. Ny maso dia tsy manana hodi-maso, na dia misy karazany sasany aza manana fonon-tsigara, misy stoma ao ambadiky ny hodi-maso tsirairay. Henjana ny hoditra ary amin'ny karazana sasany dia mitovy amin'ny taratasy fasika, misy kirany miendrika takelaka, antsoina koa hoe kirany hoditra, izay nalahatra mba hampihenana ny fikorontanana sy hihemotra. Manana neuromas manerana ny vatany sy ny lohany izy ireo, izay mpikatroka saro-pady amin'ny fihovitrovitra sy ny riandrano. Izy ireo koa dia manana mpandray manokana izay afaka mamantatra ny rembiny amin'ny alàlan'ny sahan-jiro avoakan'izy ireo, izy ireo dia blisters Lorenzini eo amin'ny lohany.
nify: Ny nify dia tsy mitambatra amin'ny valanorano ambany, misy andalana roa, ny laharana farany dia manolo ny nify tsy hita ao amin'ny laharana voalohany, ka ny nify vaovao dia afaka mitombo foana. Miankina amin'ny karazam-biby, ireo dia mety manana endrika serrated hanapahana sakafo, maranitra ary manana fiasa mamikitra, raha ny karazana mibaribary dia manana nify fisaka izay mety hosoka amin'ny tany.
Taolana sy lomano: Manana taolam-paty mineraly izy ireo, fa tsy taolana toy ny trondro hafa. Ankoatra izany, tsy manana tatavia milomano izy ireo, izay mahatonga azy ireo hilomano tsy tapaka na hijanona eo amin'ny farany ambany, raha tsy izany dia hilentika. Amin'ny lafiny iray, manana atiny lehibe izy ireo, izay misy lipida (squalene), izay manakana azy tsy hilentika.
Ao anatin'ny Chondrichthyes no ahitana ity vondrona misy ny chimera ity. Ity vondrona kely ity dia misy karazana 47 eo ho eo ankehitriny. Amin'ny lafiny anatomika dia misy fifangaroan'ny elasmobranch sy ny trondro taolana:
vatanaa Ny orony dia tahaka ny bitro ary ny rambony toy ny karavasy.
valanorano sy nify: Tsy manana nify izy ireo, fa takelaka fisaka midadasika. Ny valanorano ambony dia mitambatra tanteraka amin'ny karandoha fa tsy toy ny hafa fa avy eo no niavian'ny anarany (holo = rehetra, rehetra ary cephalo = loha).
Size: Mety hahatratra 2 metatra ny halavany.
fiarovana: Misy hazondamosina misy poizina ny vombony.
Sakafo: Ny sakafon'izy ireo dia mifototra amin'ny crustaceans, mollusks, echinodermes, trondro kely, ary algà, izay fangaro sakafo izay totohony mandritra ny sakafo.
Lomano ny Chondrichthyes
Ny Elasmobranch dia manana kirany hoditra, izay mamela azy ireo hampihena ny fikorontanana rehefa milomano. Amin'ny lafiny iray, miaraka amin'ny atiny feno lipida, ny fahafahany mitelina rivotra, ary ny vombony, dia mpilomano tena tsara izy ireo ary ireo fampifanarahana ireo dia mamela azy ireo hijanona ao anaty rano. Ny vombony hafahafa dia afaka mampivily anao, ary na ny vombony aza dia afaka mifehy anao. Amin'ny lafiny iray, ny elatra aoriana dia afaka mifehy ny fanosehana ary miteraka hery fampiatoana noho ny endriny tsy mahazatra.
Manta ray dia mifanaraka amin'ny fiainana anaty rano, fisaka ny vatany, misy vombony mitovitovy mivelatra sy mitambatra amin’ny lohany, manao toy ny elatra rehefa milomano. Ny nifin'izy ireo dia fisaka, afaka mikiky ny tany sy manodina sakafo, izay matetika dia crustaceans, mollusks ary trondro kely.
Ny rambony dia miendrika karavasy, misy hazondamosina iray na maromaro amin'ny farany, izay mifandray amin'ny fihary misy poizina amin'ny karazana sasany. Manana taova elektrônika koa izy ireo eo amin’ny andaniny roa amin’ny lohany, izay mety hiteraka fahatafintohinana elektrônika sy hanakona ny rembiny na ny biby mpiremby azy.
Ny trondro cartilaginous dia manana zezika anatiny sy fomba fananahana samihafa izay ho hitantsika eto ambany:
Oviparous: Manatody feno tavoara avy hatrany aorian'ny fampiraisana azy. Betsaka ny antsantsa sy taratra manatody ao anaty kitapo keratina. Miforona eo amin'ny faran'ny sac ny filamenta toy ny tendril, izay ampiasaina hifikitra amin'ny zavatra mivaingana voalohany hikasika azy. Ny embryon dia afaka miforona ao anatin'ny 6 volana ka hatramin'ny 2 taona. Matetika io lamina io dia miseho amin'ny karazana bitika bitika, izay afaka manatody hatramin'ny 100.
Viviparous: Izy ireo dia hamorona placenta tena izy izay ahafahan'ny embryon mihinana. Ity fomba fananahana ity dia nampiroborobo ny fahombiazan'ny evolisiona tao amin'ity vondrona ity. Miseho amin'ny efa ho 60% amin'ny trondro cartilaginous sy karazana mavitrika lehibe izy io.
Oviviparous: izy ireo dia mitazona ny embryon ao amin'ny trompes utérine dia mampitohy ny embryon ary mamahana ny kitapony mandra-pahaterahana. Izy io kosa dia manome sakafo isan-karazany ho an'ny embryon, toy ny lecithine, izay ihinan'ny embryon ny tamenak'atody; sakafo ara-nofo, izay ny embryon iray na maromaro no mivelona amin'ny ranon-javatra novokarin'ny villi ao amin'ny tranonjaza. Misy kosa ny ovule, izany hoe ny embryon izay mihinana atody zezika rehefa ao anaty tranon-jaza. Farany, misy oleanders na cannibalism ao an-kibo.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Chondrichthyes sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Chondrichthyes